စပိန်အင်္ဂလိပ် Translator APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » စပိန်အင်္ဂလိပ် Translator
စပိန်အင်္ဂလိပ် Translator APK ကို
10 သန်း downloads, နှင့် 120,000 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အတူ, ဒီဘာသာပြန်ဆိုသူအဲဒီမှာထဲကအကောင်းဆုံးပါ!
အဆိုပါအခမဲ့ Talking Translator / နေ့ကို / Daily သတင်းစာစကားလုံး app ရဲ့အဘိဓါန် / သမ်မာကမျြး features တွေနှင့်အတူထုပ်ပိုးသည်:
- 40 + ဘာသာစကားများထောက်ပံ့ပေးသည်။
- ထိုနေ့၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို - (အစ widget ကပြခြင်း, နှင့်နေ့စဉ်သတိပေးချက်များကို - က Settings မှာသူတို့ကိုကို turn off)
- ဘာသာစကားမြားစှာအတှကျကူးယူမှတ်တမ်းတင် / Transliteration
Talking Translator လည်း iPhone ပေါ်မှာယခုရရှိနိုင် - https://itunes.apple.com/us/app/talking-translator!/id579870510?mt=8
ဥပမာ, စပိနျအမရေိကနျပွညျထောငျစု, မက္ကဆီကို, ကိုလံဘီယာ, အာဂျင်တီးနား, ချီလီ, စပိန်, အီကွေဒေါနှင့်အခြားသူများကဲ့သို့အနိုင်ငံများတွင်ပြောပြီဖြစ်ပါတယ်။
Talking Translator app များကိုသင်ယူခြင်းနှင့်အတူသငျသညျအခမဲ့စပိန်သင်ယူနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်အများစုအဓိကဘာသာစကားများရရှိနိုင်ပါသည် - နော်ဝေအင်္ဂလိပ်, ကိုးရီးယား, တူရကီ, ရုရှ, ကိုးရီးယား, ဂျာမန်, အာရဗစ်, တရုတ်, ထိုင်း, ယူကရိ, ပျေါတူဂီ, ပြင်သစ်, ပိုလန်, အီတလီ, ရိုမေးနီးယား, ဂျပန်, ဟိန္ဒူ, အင်ဒိုနီးရှား, ဆှီဒငျ, ဒိန်းမတ်, ဂရိ, ခကျြမြားနှငျ့ဘရာဇီးပေါ်တူဂီ။
အဆိုပါနေ့စဉ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအင်္ဂါရပ်ကို အသုံးပြု. သင်၏ရွေးချယ်မှု၏ဘာသာစကားကိုသင်ယူပါ။
traductor ingles များအတွက် traducir သို့မဟုတ် traductor နှင့်အတူသင်ယူခြင်းစပိန် pronounciation သင်ယူနှင့်စပိန်ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေမယ့်စပိန်စာအုပ်ဖတ်နေကဲ့သို့ဖြစ်၏။ သင်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသို့မဟုတ်စပိန်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျဂြာမနျသို့မဟုတ်Españolနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်စာသားကိုဘာသာပြန်ဆိုသူစပိန်ဘာသာစကားအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပေးသည်သင်ယူဖို့ Duolingo သို့မဟုတ် Rosetta Stone သို့မဟုတ် itranslate တူသော cources ယူနိုင်ပါတယ်။
ဤဘာသာ app ကိုစာသားမဘာသာပြန်ဆိုနှင့်ဘာသာစကားဘာသာပြန်ဆိုанглийскийနှင့်学习英语သင်ယူဖို့အသုံးဝင်သည်
စကားပြောစကားလုံးသို့မဟုတ်စကားလုံးများကိုဘာသာပြန်ရန်နှင့်စပိန်ဘာသာပြန်ဆိုမှာ google နှင့်အခြားအင်ဂျင်ပါဝါကိုသုံးပါ။
သင်အင်္ဂလိပ်သင်ယူသို့မဟုတ် English လေ့ကျင့်, ဒါမှမဟုတ် english ထက် othan ဘာသာစကားများသို့မဟုတ် ingles သင်ယူဖို့လိုခငျြ
- သင့်ဝေါဟာရ Build
- တရုတ် Learn
- အခမဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာများ, သင်ယူခြင်းသို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်စကားပြော
46.06 ကို MB
GreenLife Apps ကပ
Multi Translate ...
အဘိ & ...
Speak နှင့် ...
iTranslate - ...